NIO ET5 ပွဲ ဦး ထွက် နှင့် စက်တင်ဘာလ စတင် ပေးပို့ - Pandaily
May 30, 2022, 16:30ညနေ 2022/05/30 23:35:37 Pandaily
မေလ ၂၈ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့သည့် ၂၀ ၂၂ ဂွမ်ဒေါင်း-ဟောင်ကောင်-မကာအို Dawan Area ရိယာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အော်တို ပြ ပွဲတွင်NIO ET5 အလတ်စား စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ်တရားဝင် ဖွင့်လှစ် ။
NIO အနေနဲ့ ထုတ်လုပ် မယ့် ပဉ္စမ မြောက် မော်ဒယ် ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်း ကတော့ ယွမ် ၃ ၂၈, ဝဝဝ ကနေ ၃ ၈၆, ဝဝဝ (ဒေါ်လာ ၄၉, ၂ဝဝ ကနေ ၅၇, ၉ ဝဝ) အထိ ရှိပါတယ်။ ကား သစ် တွေကို စက်တင်ဘာလ မှာ စတင် အပ်နှံ ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ်။
အပြင်ပန်း အားဖြင့် ET5 တွင် မတူညီသော ကိုယ်ထည် အရောင် ကိုး မျိုး ပါ ၀ င် မည်ဖြစ်ပြီး ပန်းရောင် နှင့် အဝါ ရော င်သည် just မော်ဒယ် အတွက် သီးသန့် ဖြစ်သည်။ ကား အရြယ္အစား ကေတာ့ ၄၇ ၉၀/၁၉၆၀/၁၄ ၉၉ မီလီမီတာ ျဖစ္ၿပီး ဘီး အခြေ ကေတာ့ ၂၈ ၈၈ မီလီမီတာ ျဖစ္ပါတယ္။
NIO ET5 တွင် ၁၂. ၈ လက်မ AMOLED display panel ၊ NIO Aquila Supersensing နှင့် NIO Adam Supercomputing တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဒါ့အပြင် စပီကာ ၂၃ လုံး ပါဝင်ပြီး Dolby Atmos 7.1.4 Surround Sound System နဲ့ Dirac Pro ရဲ့ Leading Algorithm လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:NIO သည် ပြည်ပ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ရာထူး များအတွက် အရည်အချင်း များကိုစုဆောင်း သည်
မော်ဒယ် တွင် ရှေ့ ဘက်တွင် 150kW အမြဲတမ်း သံလိုက် ထပ်တူပြု သည့် မော်တာ နှင့်နောက် ဘက်တွင် 210kW ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း သော induction motor တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏ စနစ်သည် စွမ်းအင် ၃၆၀ kW နှင့် အမြင့်ဆုံး torque 700 nm ရှိသည်။ ၄. ၃ စကၠန္႔ အတြင္း0ကေန 100km/h အထိ အရွိန္ ျမွင့္တင္ ႏိုင္ပါတယ္။
NIO ET5 ကား ပိုင္ရွင္ ေတြအေနနဲ႔ 75kWh, 100kWh, 150kWh ဘတ္ ထရီ သံုး မ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ၿပီး ကီလို မီတာ ၅၅၀, ၇၀၀ နဲ႔ ကီလို ၁၀၀၀ အသီးသီး အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။
Auto Show တွင် NIO သည်ဒုတိယ မျိုးဆက် ဘက်ထရီ လဲလှယ် ရေး စခန်း ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ သော ဗားရှင်း ကိုလည်း ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ET7 မော်ဒယ်၏ power switching ဖြစ်စဉ် ကိုပြသသည်။ NIO ‘s Super Charging Pile, 20kW Home DC Charging Pile, Home Charging Pile 2.0 ကိုလည်း အများပြည်သူ အတွက် ပြသခဲ့သည်။
Tags ∗Bytedance | ∗Didi Chuxing | ∗Luckin Coffee | ∗Tencent | ∗xiaohongshu | 996.ICU | aerospace | Alibaba | auto show | automotive industry | Autonomous Driving | Beijing Winter Olympics | Blockchain | bribery | Bytedance | CES | China | China VC Weekly | Coffee Chain | commercial rocket | delivery service | Digital Currency | Douyin | E-cigarettes | E-Commerce | e-yuan | electric vehicle | electric vehicle | Featured | Featured | financing | fintech | Food | freshippo | Haidilao | Hot Pot | internet community | Internet company | Investment | LIDAR | market regulation | massive layoff | mobile internet | Music | NIO ET5 | NIO∗ | Online Education | overseas markets | regulation | retail coffee chain | ride-hailing platform | Robot | social media | Social network | technology | Tobacco | tutoring | Winter sports | Xiaomi∗ | XPeng Motors
တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားခုနစ္ဦး တကၠစီ ပလက္ေဖာင္းေပၚ ရႊဲရႊဲ ဆင္းလာမႈအေပၚ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ျပန္လည္သံုးသပ္ေန
သောကြာနေ့မှာတော့ တရုတ်ဆိုက်ဘာအာကာသ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (CAC) နဲ့ အခြားကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး Drip Global ကုမဏီရဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအပေါ် သုံးသပ်မှု စတင်ခဲ့ပါတယ်။
Industry Jul 16 ဇူလိုင် 16, 2021
Xiao Peng အသစ်စက်စက် P5 အမျိုးအစား လေဆာရေဒါကို ပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ကား ဈေးကွက်အတွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်
တရုတ်လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်သူ နိုပင်းဟာ စနေနေ့က တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ကားအသစ်မှာ လေဆာရေဒါတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆလွန်းကား P5 ကို ကြိုတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
Industry Jul 19 ဇူလိုင် 19, 2021